Ubuhlobo bobulili bungenye yezinto ezinhle kakhulu ekuphileni komuntu wonke. Ngokulala ngokobulili, abantu ababili bangabumbana futhi bahlakazane, bahlangane nezikhathi zothando - izikhathi wonke umuntu azifisayo. Ngezikhathi ezinjalo ubuchopho bethu nezinkinga ezingenakubalwa buyeka ukuphela, isikhathi sokuyeka, nakho konke okuma umthwalo we-psyche ushakalala emoyeni. Kulezi zikhathi, ukuqonda komuntu kuqhuma ezindaweni eziphakeme zezinto ezihlanzekile.
Kungani-ke esimweni sethu, lapho ubulili bubhekwa njengento ebaluleke kakhulu empilweni, iningi libonakala lingenaso izikhathi ezinjalo? Kungani abantu begxile ubulili futhi bafuna ukuba nokuningi bengenelisekile? Kungani sifuna njalo ukuzithokozisa ngokocansi, futhi ngenxa yalokho sithola isipiliyoni sokunganeliseki ngokomzwelo? Ukuze siphendule le mibuzo, okokuqala sidinga ukubheka isiko esiphila kulo, indlela esithinta ngayo kanye nobuhlobo bethu.
Ubulili emkhakheni wokuhlukanisa
Ngokuthuthukiswa kobuchwepheshe besimanje, kubonakala sengathi thina, abantu, sixoxisana kakhulu kunanini ngaphambili. I-intanethi isisize ngokukhethekile ukudala inethiwekhi yokuxhumana yomhlaba wonke lapho singabelana ngemibono futhi sihlanganyele nabanye abantu kunoma iyiphi ingxenye yeplanethi yethu, nemilayezo efinyelela engxenyeni yesibili. Naphezu kwalokhu, kubonakala sengathi sidinga ukuxhumana kunanini ngaphambili.
Kungakhathaliseki ukuthi bangaki abangani bakho noma "abalandeli" esinabo ekuxhumaneni nomphakathi, abaningi bazizwa behlukanisiwe. Lokhu kungenxa yokuthi ubudlelwane be-intanethi bukhulu kakhulu kangangokuthi abakwazi ukusinika umqondo weqiniso osondelene noxhumano. Imilayezo yombhalo ayikwazi ukufaka ingxoxo esikhundleni sezingxoxo zomuntu siqu, i-smiley ayikwazi ukushintsha ubuso obuso, ukubonakala kwesobuso, nokuxhumana nge-intanethi ngokuqinisekile ayiqhathanisi noxhumana nomzimba.
Ngesikhathi esifanayo (ngenxa yezingxabano nobudlova obukhona emphakathini wethu), iningi labantu lizabalazela ukuvula izinhliziyo zabo kwabanye futhi kunzima ukunquma ubudlelwane obuseduze, besaba ukuthi bangase bahlupheke kubo. Ukuze bagweme lokhu, badala izindonga eziphakeme futhi ezinzima ezizungeze izinhliziyo zabo ukuze zizivikele kunoma iyiphi ingozi engenzeka. Futhi nakuba izindonga zingavimbela ubuhlungu nokuhlupheka, kodwa futhi bayeke ukuthanda abanye nokuthandwa.
Ngaphezu kwalokho, siphila esimweni sezomnotho lapho yonke into isekelwe ekusetshenzisweni, lapho abantu behlale benomuzwa wokucindezeleka, baphoqelelwe ngokomthetho ukuthenga izimpahla ezithile.
Lokhu kucindezelwa kuthuthukiswa kakhulu embonini yokukhangisa. Kanjani? Sizama njalo ukuqiniseka ukuthi ukuthenga izinto kuyisisombululo kuzo zonke izinkinga zethu. Isibonelo, uma uzizwa unesizungu futhi ungathandwa, izikhangiso zithengisa imikhiqizo noma amasevisi azokukwenza uqiniseke, omuhle futhi ukhange kwabanye. Eqinisweni, izikhangisi eziningi zisebenzisa izidingo zethu ezingenakuvinjelwa zokuxhumana nabantu.
Ubulili buyathengiswa yonke indawo: kuma-movie, kumamagazini esiwafunde, ngisho nasezingutsheni esizigqoka. Usuku nosuku, sincishiswa ngemilayezo eminingi yezocansi. Akumangalisi ukuthi abantu baqala ukucatshangelwa ubulili, bakholelwa ukuthi yilokho kuphela okubalulekile ekuphileni. Kodwa, kungakhathaliseki ukuthi zithandwa kangakanani izindaba nokudla "kobulili", siyasizwa singenalutho ngaphakathi futhi sifisa ngaphezulu, ngoba ayikho enye yalezizinto ezingasinika lokho esikufunayo ngempela - uthando oluqotho oluvela enhliziyweni.
Ubulili njengengxenye yothando
Ngisho nesenzo socansi kunazo zonke akwanele ukucima ukoma kwethu. I-Genitalia ingaxubana ngomunye nomunye, kepha uma kungekho ukungaxubanisi phakathi kwezinhliziyo zabantu ababili, inhlansi yothando ayikwazi ukushaywa indiva.
Uthando lungaphezu kokuphumula kombhede nokuthokoza kwesikhashana, etholakala ngokuxhumana okuncane ngokomzimba. Ngakho-ke ukukhathazeka ngocansi. Naphezu kwenombolo yabathintana nabo, abantu abatholi ukwaneliseka, kodwa ngenxa yokuthi bafuna okungaphezu kwalokho, nakuba ubulili ngokwalo akuyona into esiyifunayo ngempela.
Ubulili njengesenzo sothando
Sifisa ngenhliziyo yonke ukuthanda nokuthandwa, futhi ukuvinjelwa kwe-banal ngeke kushintshe lokhu. Ungakwazi ukunikeza inkolelo yesikhashana nje yothando, ukuhlanganisa imizimba emibili, kodwa akanamandla okuhlanganisa izinhliziyo ezimbili ezikude komunye nomunye. Futhi ngenkathi izinhliziyo zihlukanisiwe, ubulili ngeke businikeze okuhle.
Kodwa-ke, lapho izinhliziyo ezimbili zihlangene, ucansi lithatha uhlobo oluhluke ngokuphelele - luba yindlela yokuveza imizwa eqotho. Ngezocansi, abathandi bangakwazi ukuxhumana nomzimba nomphefumulo, okungukuthi, konke okukhona.
Ungasho lokho ngokuphepha ngothando lwangempela, ubulili abubalulekile kakhulu, ngoba bungama emilenzeni, ngaphandle kwesidingo samagundane, okuwukuthi, ngokocansi. Kodwa ubulili bungaba ngumdlalo wokuthanda phakathi kwabantu ababili, umdanso lapho abantu ababili behlangene khona befinyelela e-orgasm, bajabulele izikhathi ezimnandi.
Ukulahlekelwa ezandleni zabathandekayo, sinezinye zezindlela zokufa. I-flame ekhanyayo yothando enhliziyweni, kanye nenjabulo eyinhle yokulala ngokobulili, ayishiyi indawo ye-ego.
Uma sithandana, izingqondo zethu ngezimpilo zabo zangaphambili nezesikhathi esizayo, konke ukukhathazeka kwethu kanye nezinkathazo zethu ziyaqedwa. Futhi yilokho kanye uthando oluyilokho. Lokhu kukhula okumnandi, okungukuthi, ukunyamalala kwemingcele yonke, umuzwa wokuba ngowomhlaba wonke, ukujula okungeke sikuqonde. Uma lokhu kwenzeka, siyakhanya futhi sizizwe kahle. Akukho okunye okudingekayo - sizizwa siphelele futhi asidingi lutho. Ukufisa nokulindela ukuyeka ukusihlupha, futhi samukela impilo njengoba kunjalo.
Uma nje kungekho uthando phakathi kwalabo abalingani ababili, ubulili angeke kube yinto engaphezu nje kokubonakaliswa kobugovu. Ozakwethu bazozama ukulawula futhi basebenzisane, baphendane ezintweni zabo zocansi kuphela ukwaneliseka komuntu siqu. Ngaphandle kokwazi, bafuna ukuthola uthando ngenxa yobungqingili, kodwa uthando ngumzwelo ongeke ufike ngokuphoqelela noma isifiso. Ukwamukela ubulili ngothando futhi ufuna ukucima ukoma kwakho kokukhulumisana kwangempela, abantu baqala ukukhathazeka ngezenzo zocansi ezengeziwe, bangaqapheli ukuthi bazama ukuphuza emthonjeni ongenalutho.
Indlela yokwenza man.
Iziphi izingxenye zazishintsha zaba nemizimba yabantu ukuheha abesifazane kakhulu?
Aphrodisiacs imikhiqizo amadoda (uhlu)
Ubulili ngoba amadoda - kwembula izimfihlo!
I amaphutha main uma usebenzisa ikhondomu - amathiphu ukuzigwema
Imisebenzi eyinhloko amaphoyisa Russian: incazelo, izidingo kanye nezimiso
Kusho inja esinamakhanda kanjani kwenkawu?
Ifilimu "Agasti. Eyesishiyagalolunye ": abadlali kanye nezindima
Yehlela: kulokho imisipha ziwumthwalo? Kanjani ukwenza push-ups nemigoqo
Bondzaweni esuselwe nemikhiqizo lokubusa, uhlu izibonelo
Imizi emikhulu ye-Great Patriotic War. Amadolobha-amaqhawe weMpi Enkulu yePatriotic
Amathrekhi we-Michelin latitude we-Michelin latitude - i-patency engavamile kanye nenduduzo
Cherry wazizwa: zokutshala nokunakekela
Senza loan esheshayo